I-Archinstall, insiza ezokwenza i-Arch Linux ibe lula ukuyifaka | Kusuka kuLinux
I-Arch Linux ibhekwe njengokusatshalaliswa kweLinux okubhekiswe kubasebenzisi abaphakathi nabaphambili kuLinux nokuthi akunconyelwe abasebenzisi abasha noma labo abebethutha besuka kolunye uhlelo lokusebenza (yithi iWindows noma iMac OS) futhi yize empeleni inqubo yokufaka ingekho nzima, iqiniso ukuthi uma kuvame ukuthatha isikhathi eside kunokujwayelekile ukuthi uma kusetshenziswe enye iwizadi yokufaka noma iskripthi esithile.
Yize abaningi bezokuvuma lokho Lokhu kudela isikhathi esincane kunomvuzo ngokuba nohlelo olwenzelwe wena ngokwengeziwe futhi ipholishiwe ngokwesilinganiso sokusebenzisa kwakho, noma ngabe kulabo abalangazelela ukuba ne-Arch Linux ngaphandle kokudlula ngendlela yayo yakudala yokufaka, bangakhetha okokuthola.
Futhi isizathu sokuthinta le nkinga kungenxa yokuthi muva nje i- Kuthulwe abathuthukisi be-Arch Linux ngesikhangiso ukuhlanganiswa kwe- "Archinstall" isifaki ngaphakathi kwezithombe ze-ISO zokufaka, engasetshenziswa esikhundleni sokufaka ngesandla ukusabalalisa.
I-Archinstall isebenza ngemodi ye-console futhi inikezwa njengenketho yokufaka ukufakwa kokuzenzakalelayo wokusatshalaliswa yize kubuye kube ngokwakhona, njengakuqala, imodi yesandla iyanikezwa, okusho ukusetshenziswa komhlahlandlela wokufaka isinyathelo ngesinyathelo.
Ukuhlanganiswa kwesifaki kumenyezelwe ngo-Ephreli 1, kepha lokhu akuyona ihlaya abaningi abacabanga ngalo, njengoba i-archinstall ingezwe ku / usr / share / archiso / configs / releng / profile), imodi entsha ihlolwe isebenza futhi empeleni kuyasebenza.
Futhi, ukukhuluma kwakho kungeziwe ekhasini lokulanda futhi iphakethe le-archinstall lengezwe endaweni esemthethweni ezinyangeni ezimbili ezedlule. I-Archinstall ibhalwe ku-Python futhi ibilokhu ivela kusukela ngo-2019. I-plugin ehlukile ngokusetshenziswa kwesikhombimsebenzisi sokuqhafaza isilungiselelwe ukufakwa, kepha ayifakiwe ezithombeni zokufaka ze-Arch Linux okwamanje.
Isifaki sinikela ngezindlela ezimbili: eziqondisiwe nezizenzakalelayo. Kumodi yokusebenzisana, umsebenzisi ubuzwa imibuzo elandelanayo ehlanganisa izinyathelo eziyisisekelo zokusetha nokufaka.
Ngemodi ezenzakalelayo, kungenzeka ukusebenzisa imibhalo ukudala izifanekiso zokufaka ezijwayelekile, le modi ifanele ukudala ama-prototypes akho aklanyelwe ukufakwa okuzenzakalelayo ngesethi ejwayelekile yokulungiselela namaphakeji afakiwe, ngokwesibonelo, ukufakwa okusheshayo kwe-Arch I-Linux ezindaweni ezingokoqobo.
Nge-Archinstall, ungakha amaphrofayili wokufaka athile, isibonelo, iphrofayli "yedeskithophu" ukukhetha ideskithophu (i-KDE, i-GNOME, i-Awesome) bese ufaka amaphakheji adingekayo ukuyenza isebenze, noma amaphrofayli "we-web server" ne "database" ukukhetha nokufaka okuqukethwe kwewebhu, amaseva kanye I-DBMS. Ungasebenzisa futhi amaphrofayli ukufakwa kwenethiwekhi nokuthunyelwa kwesistimu okuzenzakalelayo eqenjini lamaseva.
Okokugcina kulabo abanentshisekelo yokwazi umhlahlandlela wokufaka, ungaxhumana nemininingwane ebuyekeziwe ngaphakathi kwe-Arch Linux Wiki Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Ngokuqondene nalabo abazibuza ukuthi yini umehluko okhona phakathi kokufakwa okuvamile kwe-Arch Linux vs ukusetshenziswa kwe-archinstall, ngiyabona shazi ukuthi i-archinstall ngokuyisisekelo ikukhulula ekuthayipheleni imiyalo noma ulwa kakhulu nokwazi ukuthi hlobo luni lwesakhiwo sekhibhodi. , ulimi, indlela yokwahlukanisa, amadiski, njll., ngoba ukuba ithuluzi "ngezinga elithile okuzenzakalelayo" kukongela isikhathi esiningi.
Yize njengokuphawula komuntu siqu, ngingasho ukuthi umongo wokukwazi ukuba ne-Arch Linux ufunda kanjalo, ngoba ukufakwa kokusatshalaliswa kukunikeza ukuqonda okuthe xaxa ngemizila, imisebenzi yohlukaniso ngalunye kanye neminye amafayela wokumisa.
Ngenkathi i-Archinstall ivumela ukwahlukaniswa okuzenzakalelayo ngokukhetha kwakho izinketho zohlelo lwefayela, faka ngokuzenzakalela imvelo yedeskithophu, lungiselela izixhumi zenethiwekhi, nakho konke okunye.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Archinstall, insiza ezokwenza i-Arch Linux ibe lula ukuyifaka
Hhayi-ke sekuyisikhathi. Ungakha uhlelo olwenziwe ngokuphelele futhi ube nobungane obuncane. Ngaphezu kwalokho, ungahlala unikeza ithuba lokuqhubeka nokufaka yonke into ngesandla. Into eyodwa ayisusi enye. Ilungele i-Arch.